Chọpụta ihe mere ị ga - eji nwee ike ịba ụra na ụzọ dị mma iji wepụ ya - ntụrụndụ
Home » blog » Chọpụta ihe mere ị ga - eji nwee ike ịba ụra na ụzọ dị mma iji wepu ya
Kedu ihe bụ isi na-akpata isi afọ isi? Enwere ọtụtụ echiche na nke a. Ụfọdụ ndị na-ekwu na ọ bụ ọrịa na-adịghị mma. Ndị ọzọ na-ekwu na ọ bụ nrụgide. Ọtụtụ ndị ọzọ na-ekwenye na ọ bụ n'ihi ntakịrị mgbochi. Ya mere, olee eziokwu? N'ikwu eziokwu, ọ na-abụkarị mgbe nile na-esite n'àgwà oriri na-adịghị edozi ahụ na ndụ na-adịghị arụ ọrụ.
* Gịnị bụ atụmatụ nri kachasị dị irè maka ọnwụ ọnwụ?
A nri na-agụnye ọtụtụ ihe oriri nkịtị. Iwu kachasị mkpa iji cheta bụ izere ihe oriri ọ bụla a na-edozi. Nke a bụ usoro dị ike ma dị mfe nke ọtụtụ ndị ji mee ka abụba ha bụrụ abụba. Oge ị na-eri bụkwa ihe dị oké mkpa. Dị ka ihe zuru ezu, naanị iji zere iri nri n'oge ogologo oge nke adịghị ike. Nye ọtụtụ ndị mmadụ, nke a ga-abịa n'isi ụtụtụ tupu ị gaa ụra.
Ebe ọ bụ na ị naghị arụsi ọrụ ike ịkụcha calorie, nke a bụ otu n'ime ihe ndị mere a na-atụkarị aro ka ị ghara iri tupu ị lakpuo ụra. Ozu ahụ na-agwụsị ịchekwa ọtụtụ n'ime nri ndị dị ka abụba. Naanị na-eri ụfọdụ mkpụrụ osisi na ihe oriri ma ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị mgbe ị na-adịghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị mfe ịgbaso atụmatụ, chọpụta Rie Kwụsị Rie mmemme nke dị oke mma maka ndị nwoke na ndị inyom nọ n'afọ ndụ niile. Ihe omume ọzọ a na-ewu ewu iji kwụsị ịdị arọ ọnwụ anyị na-akwado ga-abụ 4 Week Diet site na Brian Flatt.
Ma ị na-ahọrọ otu n'ime atụmatụ ndị anyị kwuru ma ọ bụ na ọ bụghị, akara ala banyere ọnwụ dị arọ bụ na atụmatụ nri gị dịkwa oke mkpa dị ka mmemme gị. Gịnị mere ị ga-eji wepụ oge niile na mgbatị ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-eri nri dị ka ihe mkpofu? Jide n'aka na ị gbanwee àgwà iri nri gị ma gbalịa ịdịkwu arụ ọrụ. Nke a bụ ndụmọdụ kachasị mkpa anyị nwere ike inye gị.
* Gịnị bụ usoro mgbatị kachasị mma?
N'agbanyeghị ihe ị nụworo, ọ naghị agba ọsọ na mpempe akwụkwọ ruo ọtụtụ awa. Ihe na-ekpo ọkụ na-agba ọkụ nke ịgba ọsọ na-arịwanye elu, ị ga-agbakwa ọsọ ogologo oge iji hụ nsonaazụ dị ịrịba ama.
Maka ndị mmadụ, mmemme mmega ahụ anyị na-akwado ga-abụ Ụdị Beast Oriri arọ. Anụ anụ arọ anụ ahụ bụ atụmatụ 30 mara mma nke na-agụnye ịmepụta ahụ gị. Lelee vidio dị n'okpuru ebe a maka 10 nke kachasị arụ ọrụ ahụ.
Nwunye na chịkọta ya na 30-Days with Body Weight Beast
Maka ụmụ nwanyị, usoro 2 mmega ahụ dị ukwuu anyị na-akwado ga-abụ Bikini Body Workouts na Flat Belly Fast. Ọrụ Ụlọ Ọrụ enye gị ihe ngosi vidio na-emegasị n'ịntanetị, ihe nduzi na-edozi ahụ, nduzi nlekọta ahụike, ihe nkwụsị nke 21 taa na-agba ọsọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ngwa ngwa ngwa bụ usoro mmemme ọhụrụ nke onye na-enye ọzụzụ Danette May nwere. Ihe dị egwu banyere Mee ngwa ngwa ngwa ngwa bụ na Danette May na-enye atụmatụ ya na DVD maka FREE ị ghaghị ịkwụ ụgwọ maka mbupu ya mere ọ dị ezigbo mkpa ịlele. Flat Fastly Fast na-agụnye ụbọchị 10 na-eri nri na ntụziaka ọkụ ọkụ na-esi ike.
Ọ bụ ezie na enweghi usoro mmega ahụ kachasị mma, e nwere ọtụtụ usoro a na-achọpụta na-arụ ọrụ. Usoro mmemme a dị irè enyerela ọtụtụ puku mmadụ aka ịba ụba anụ ahụ. Ịgbaso otu n'ime usoro a a ma ama ga-enyere gị aka ị nweta ihe ị chọrọ ngwa ngwa.
* Gịnị bụ omume kacha mma?
Omume ahụ dum na ọzụzụ ọzụzụ oge dị elu (HIIT). Na-eche ihe HIIT dị? HIIT, ma ọ bụ ọzụzụ ọzụzụ oge dị elu, bụ usoro ọzụzụ nke ị na-enye ihe niile, otu narị pasent mgbalị site na ngwa ngwa ngwa ngwa nke mmega ahụ, na-esote obere, mgbe ụfọdụ ọrụ, oge mgbake. Ịrụ ọrụ mgbatị zuru ezu na isi ihe ndị na-eme ka afọ gị kwụsị, ga-enyere aka mee ka ọbara gbasaa n'ime mpaghara gị; nke ga - eme ka ụbụrụ abụba ngwa ngwa.
Ihe kacha mkpa icheta maka mmega ahụ a bụ na ị ga-eme ya n'ụzọ ziri ezi tupu ịga n'ihu. Ọtụtụ na-abanye n'omume nke ime ihe omume ndị a na-adịghị mma iji mee ọtụtụ nzaghachi.
Mgbe a na-eme ihe na-ekwesịghị ekwesị, nrụrụ abdominal nwere ike ibuteghachi nsogbu n'ọdịnihu. Jide n'aka na ị maara usoro ziri ezi tupu ịwụbanye n'ime mgbatị gị. Kedu ihe omume kacha mma? Enwere otutu ihe omumu iji choputa, ebe a bu ihe di uku iji malite na:
* Stability obi ụtọ crunches
Mgbe a na-eme ụzọ ziri ezi, nke a bụ otu ụzọ kachasị mma isi kpochapụ abụba afọ. Nke a bụ ihe ịkwesịrị ime: buru ụzọ dinaa azụ na bọmbụ kwụsiri ike, hụ na ala na etiti azụ gị na-agbatị.
Hụ na ị ga-ehicha ikpere gị ma ghara ikwe ka ụkwụ gị bịa n'ala. Ugbu a, tinye aka gị n'isi gị ma bulie onwe gị elu dịka ị ga-esi na crunch nkịtị ... wee jiri nwayọọ nwayọọ laghachi azụ.
* Ma olee ihe mere eji eji bọmbụ eme ihe?
Ịga n'ihu na-eme ka ọ dịkwuo mma n'ihi na mkparịta ụka na-eme ka enweghị ike ịgbatị. Ọ na-arụkwa ọrụ karịa akụrụngwa. Ị ga-erekwu calorie ma zụlite ọganihu siri ike na bọmbụ na-emega ahụ.
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, isi ihe na-eme ka ọrụ nchịkwa na-aga n'ihu bụ agbanwe agbanwe. Jide n'aka na ị ga-enweta atụmatụ a nwapụtara ma mee ihe na-adịghị agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe mgbe niile iji nweta ihe nhụsịrị nha nke ịchọrọ. Ebe ọ bụ na ndị mmadụ anaghị enwe ihe mgbaru ọsọ doro anya, ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-amalite ihe omume ndị bụ isi ma kwụsị izu ole na ole n'ime ya bụ nke jọgburu onwe ya.
Nke a bụ ihe mere mmemme mmemme dị ka 1 Hour Belly Blast na Danette nwere ike ibu DVD ngwa ngwa dị irè. Atụmatụ a maka oge a kara aka, ị makwaara ihe ị kwesịrị ime kwa ụbọchị. Ihe niile ị ga - eme bụ ịgbaso usoro ihe omume iji hụ nsonaazụ ịchọrọ. Nke a bụ nkwekọ na nkwekọ ga-abụ enyi gị kachasị mma ma a bịa n'inweta ahụ ị chọrọ. Mee ka anyị mara echiche gị banyere isiokwu a na ihe ndị dị n'okpuru ebe a ma nweere onwe gị ịkekọrịta ndụmọdụ ọ bụla dị arọ ị na-enweta